Ubisi "Mozhayskoe": izithombe kanye nokubuyekeza
Mozhaysk, ise entshonalanga nesifunda eMoscow, Akukhona nje kuphela idume esidlule yayo nobuqhawe lempi. Zonke izakhamuzi zaseRussia uyazi ukuthi lapha ukukhiqiza "Mozhayskoe" ubisi esihlwabusayo futhi unempilo. Kungani kungafani, ngoba ayezoba kangaka uyakuthanda abathengi futhi yiziphi izinzuzo ekukhiqizeni nezinye izitshalo zasekhaya?
Umkhiqizi "ubisi Mozhaiskogo '
Inkampani izimisele kwaveza "Mozhayskoe" ubisi, yasungulwa emuva ngo-1963. Kamuva, ngemva kokuwa zase-USSR, ke iqanjwe kabusha futhi manje iqanjwe CJSC "" Mozhajskij "imboni ubisi inzalo. Itholakala esifundeni Isizalo ehlanzekile nesifunda eMoscow, lapho azikho amabhizinisi ezinkulu ezimbonini.
Lesi sitshalo ukhiqiza inzalo ubisi "Mozhayskoe", edinga izinto ezikhethekile eluhlaza ukuthi iyahlangabezana nezidingo anda. It ikufanele ukwelashwa ezijulile-ukushisa, ngakho-ke kubalulekile ukuvimbela ukulahleka nezimfanelo zayo ezuzisayo. laboratory ekhethekile ifakwe imishini kakhulu yesimanje eklanyelwe le njongo kanye emagcekeni ejele.
Ngisho nangemva kweminyaka engu-50 ubisi "Mozhayskoe" iqhubeka akhiqizwa gilazi tsha okungukuthi ngokuphelele imvelo nobungane ephephile. Ngenxa lelisu, umkhiqizi yasekhaya has eziningi eziwusizo phezu izinkampani ukuncintisana.
Kuyini - ubisi "Mozhayskoe"?
Kuba ngempela ubisi okumnandi uvele emashalofini ezitolo zaseSoviet 60s zakuqala, futhi ngokushesha won ukuqashelwa inombolo enkulu abathengi. Kodwa okubaluleke kakhulu, izinga ke, ngisho nangemva kweminyaka eminingi ayiguquki. Lokhu kufezwa sibonga izinto zokusetshenziswa khetha, futhi ezimbili-mbili sokusabalalisa ubisi inzalo. Ngemva kwalokho, umkhiqizo kuba ukunambitheka hhayi kuphela ezinkulu, kodwa futhi Tint abadumile sinombala.
"Ubisi Mozhayskoe ', okumelelwe isithombe ngenhla, kakade inzalo glass amabhodlela e autoclaves ekhethekile ngomfutho ophakeme. Khona-ke ukwelashwa ukushisa kuyakhethwa kanye homogenisation imodi ethile. Ngakho-ke iba ubisi kanzulu ukunambitheka eyingqayizivele kwancibilika. Ngokusebenzisa ezijulile umkhiqizo ukwelashwa ukushisa singasetshenziswa ligcinwe 1 kuya 6 izinyanga.
Namuhla, kunamabandla angu-8 izinhlobo inzalo "Mozhaiskogo" okuqukethwe ubisi fat 0.5% kuya ku-8% kanye lactulose. Kuyinto kwakwakhe organic ukuthi kuyafana ngokwemvelo nge prebiotics, okuyinto ubuyisela kahle microflora. Ngaphezu kwalokho, "Mozhajskij" ifektri ubisi inzalo ukhiqiza 2 izinhlobo ubisi pasteurized namafutha encibilikisiwe kusuka 1.5% kuya ku-6%. Umkhiqizo wemvelo ngokuphelele, ngaphandle nezivimbelakuvunda noma flavour.
Dairy ukukhiqizwa isitshalo eyethulwe okunezinhlobonhlobo ebanzi. Thola umkhiqizo ngendlela esilindele yakho konke khona. Ngaphandle inzalo, elicibilikile pasteurized ubisi nkampani inyathelisa:
Milkshakes okuqukethwe amanoni 1.5% -2.5%. Shelf ukuphila izinyanga 4. Ikhishwa milkshakes raspberry azwakale kamtoti, cherry, sitrobheli banana, vanilla, ikhofi, caramel ukhilimu (toffee) kanye ne ukwengeza Chicory.
Cream: 10% amafutha inzalo glass amabhodlela kanye pasteurized kuya 35% enkomishini plastic. Impilo esidlule kungekho izinsuku ezingaphezu kwezingu-7.
Ukhilimu omuncu ngokuqukethwe namanoni 20-30% ngo-250-igramu plastic cup. Ukwakheka umkhiqizo - eliphezulu ukhilimu nge ayabila acidosis.
Cottage shizi in ucwecwe laminated okuqukethwe amanoni 9% futhi 18%. isikhathi Isitoreji - amahora 72.
okuqukethwe Adygeisky ushizi namanoni 18%. umkhiqizo esihlwabusayo futhi unempilo nge wokuqukethwe lelisetulu amaprotheni.
Ibhotela. Kwemvelo ngokuqukethwe namanoni 82,5% kusukela ukhilimu pasteurized.
Yonke imikhiqizo iyahlangabezana nezindinganiso eliphezulu kakhulu, kanye ubisi wendabuko "Mozhayskoe", nomkhiqizi okuyinto kusese liyabonakala kakhulu emakethe yasekhaya. AbaPhathi nabaPhathi Ochwepheshe zalesi sihlahla abayeki lisebenzela ukuthuthukisa umkhiqizo wawo uhla.
Positive Izibuyekezo ikhasimende
Into yokuqala ukuthi abathengi uphawule lapho ibhodlela le isiphuzo ewusizo - nomklamo walo ongajwayelekile. Ngokuvamile, ubisi Sidayisa a 0.5 noma 1 ilitha. Kodwa "Mozhajskij" isitshalo is zihlukaniswa. Ibhodlela yanoma yiziphi iziphuzo noma wabhaka inzalo has a ivolumu 0.45 amalitha, okuyinto ngempela elula, kusukela "Mozhayskoe" Ubisi, ukubuyekezwa zazo ethulwa ngezansi, Luhle njengoba isidlo emsebenzini noma esikoleni.
Ngaphezu kwalokho, amakhasimende like umkhiqizo zalesi sitshalo ethile, ngoba:
It has a ukuphila eshalofini eside (kungenzeka ukuthenga amabhodlela amaningana zigciniwe);
Ukwakheka yemvelo (ubisi lonke futhi ukhilimu);
ukunambitha like a ubisi ebuntwaneni ozithandayo;
Bathanda futhi izingane kanye nabantu abadala;
sibonga zobuchwepheshe banamuhla inzalo konke amavithamini ewusizo futhi izakhi yezimbiwa.
I izakhiwo eziyingqayizivele ubisi baziswa hhayi kuphela abathengi. umkhiqizo Kwethulwa - winner eziningi Zonke-Russia imincintiswano, owawina diploma kanye nemiklomelo.
Amakhasimende ayikuthandi ubisi kusukela Mozhaisk?
Baningi impela abantu zama lo mkhiqizo, kokushiya imibono engakhi ngakho. Ubisi "Mozhayskoe" angisithandi:
lokucuketfwe fat okusezingeni eliphezulu whereupon umlomo waso ukunambitheka ezingemnandi;
ukuphila eshalofini eside kakhulu, nge izincazelo abazi ukwethemba mayelana inzalo ubuchwepheshe;
ungakhululekile isikulufa cap, okuyinto okunzima kakhulu uyasikrufulula, ngisho indoda;
Ayikho ibhodlela lemiqulu emikhulu - iziqukathi ezincane ewusizo ongabheka kuyo ukuze snacking, kodwa ngeke ngokwanele ukulungiswa yobisi kophudingi nokusanhlamvu;
amanani entengo aphezulu - lokhu isiphuzo okunempilo ukuzamukela yabathengi abaningi, isigaba intengo;
isisindo okusezingeni eliphezulu kanye fragility we esitsheni, okuyinto esingesihle, uma lokhu kudingekile ukuze bakubeke ezandleni zakhe.
Zonke ezimbi ngalokhu ewusizo ukubuyekezwa komkhiqizo kwesokunxele ikakhulu labo abathengi ungathandi ukuba baphuze ubisi. Ngokuvamile, ukuzwakala kwakhe kuhlala kuqhathaniswa kakhulu ukuzama lesi siphuzo.
Lapho ukuthenga "ubisi Mozhayskoe '?
"Mozhajskij" Akubona bonke abathengisi imikhiqizo ifektri inzalo ubisi. Lapho angathengwa eRussia?
Ubisi "Mozhayskoe" ukuthenga e eYekaterinburg kungenzeka ezitolo uchungechunge kanye nezitolo ezinkulu ezinkulu. inzuzo yakhe onohlonze - ukuphila eshalofini eside, ukuze ukwazi ukuthenga amabhodlela amaningana, futhi ungesabi lokho umkhiqizo uzogcina ukuwohloka.
Ngo yochungechunge olufanayo ezitolo ithengiswe ubisi eMoscow, eSt Petersburg kanye nezinye izikhungo wesifunda Russian Federation. Ngaphezu kwalokho, ungahlala oda e ezikhethekile ezitolo inthanethi.
Yeka ukuthi kuyinto ubisi?
Intengo kwezimpahla kuncike kwikhwalithi yaso. Liqinisekisa ngokugcwele ubisi "Mozhayskoe". Kuwufanele kuba impela eqolo, njengoba kuphawulwe Ukubuyekeza yakhe, iningi abathengi. Intengo yale ibhodlela ewusizo isiphuzo incike nokuqukethwe kwalo amafutha. Ayanda kuba, ubisi ezibizayo.
Ngakho, ibhodlela umkhiqizo 2.5% amafutha kuyodingeka bakhokhe ruble 86 (per 450 ml). Ndawonye nale ubisi inzalo 4% izobiza ruble 92, futhi yancibilika - ruble 94.
athunyelwe ku ubisi amanani ahlale okusezingeni eliphezulu, kodwa isidingo it is hhayi falling. Lo mkhiqizo emakethe Russian kungokwalabo ingxenye premium.
Izinzuzo "ubisi Mozhaiskogo '
Lo mkhiqizo akusilo ize iwine uthando abantu eRussia kanye CIS amazwe. Ngempela enezinto eziningi Izinzuzo ebaluleke phezu imikhiqizo efanayo evela kwamanye izimboni:
ingilazi ibhodlela (njengoba ezinsukwini ezimnandi zakudala);
yesimanje ezimbili isigaba ohlelweni inzalo;
eshalofini yokuphila Ephakeme kuze kube izinyanga eziyisithupha;
ubisi yemvelo eluhlaza (ngaphandle kwalokho izithako ezomile, nezivimbelakuvunda futhi flavorings);
tint esiyingqayizivele sinombala;
ukunambitheka okukhulu ubisi kubhakwa.
Ngenxa yalezi zici ezinhle ubisi premium kusuka Mozhaisk uhlala aphume mncintiswano emakethe Russian. Kufanele sizame ubani othanda ukunambitheka omnene ubisi amnandi kubhakwa, iyafana esitofini waseRussia. Funda ezitolo Kulula kakhulu - kuba, njengoba kwakunjalo eminyakeni engu-50 edlule, namanje edayiswa ibhodlela.
Ukwakheka, izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ka kvass
Indlela ukupheka cocktail? Indlela ukulungiselela cocktail in a blender?
Rosehip - izici ezibaluleke isimangaliso isitshalo.
Izindlu Solid - kuyini? Ubuchwepheshe kwezindlu Monolithic
Yini okufanele ibe kuhhavini pizza? Yini ngokuqinile ukuthenga kuhhavini pizza? Izibuyekezo nochwepheshe iseluleko
Yini ukudla okune amaprotheni ziphele kusilela kwalesi sakhi
Kuyini idiphozi ebhange? Indlela yokuvula idiphozi inzuzo ebhange
Izindawo zamanzi emzimbeni: i izimbangela kanye nezici ukwelashwa
Abathandwayo isu-based ukuphenduka esigabeni
Ukwenza amabhilikithi - ujamu kusuka ku-cowberry
Kuyini 'soft', izinhlobo zalo
Yini okufanele ibe isaladi ezinganeni yosuku lokuzalwa?